အယ်ဖိုး: Google Talk Style
Google Talk Style
ဒါကတော GTalk ရဲ့ ပုံစံ Style လေးတွေကို အမျိုးမျိုး ပြောင်းချင်သူများ အတွက်ပါ . လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် .
(၁) အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ Download လုပ်ယူပါ .
(၂) ရလာတဲ့ ဖိုင် အားလုံးကို Copy ကူးယူ လိုက်ပြီးရင် C:\_Program Files\_Google\_Google Talk မှာသွားပြီး paste လိုက်ပါ .. paste လုပ်တဲ့ အခါမှာ တစ်ခုခုမေးလာရင် yes all ပေးလိုက်ပါ. အဲဒါဆို ရပါပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် . အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ။
Posted by Peace at 12:15 PM